Gastronomy nke Kambodia: efere nri Kambodia | Akụkọ Njem
Nri nri na Cambodia
Maria José Roldan | | Cambodia, Gastronomy, Asia njem
Mgbe ndị mmadụ na-eme njem, ọ bụ ihe dị mma na ha chọrọ ịnwale gastronomy nke ebe ahụ, ọ bụ ụzọ ịmara omenala na ndị bi n'otu ebe. Cambodia bụ ebe nlegharị anya ebe ọtụtụ mmadụ na-eme njem kwa afọ iji nweta ezigbo ezumike.
Ọ bụrụ n’ịbu n’obi ịga Cambodia, isiokwu a ga-amasị gị.
1 Nri na Cambodia
2 Achịcha nkịtị nke Cambodia
2.4 Akpa Lak
2.6 Chaa Kdam: nshịkọ eghe
2.7 Osisi uhie uhie na anụ na basil
3 Desserts na Cambodia
Nri na Cambodia
Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka oseose ma ọ bụ dịgasị iche dị ka nri ndị ọzọ nke Thailand ma ọ bụ Vietnam, nri dị na Khmer dị ụtọ ma dịkwa ọnụ ala ma n'ezie, osikapa na-eso ya.. Enwere ike ịchọta njirimara Thai na Vietnamese na nri Kambodia. ma ọ bụ Khmer, ọ bụ ezie na ndị Kambodia hụrụ ezigbo ụtọ na nri ha, ọkachasị ịgbakwunye prahok, nri azụ ahụ ama ama. Na mgbakwunye na nri Khmer, enwere ọtụtụ ụlọ nri ndị China, ọkachasị na Phnom Penh na mpaghara etiti.
Banyere ọdịdị nke nri Kambodia, ha amụtala ihe na nri ndị France, M na-ekwu banyere ihe niile maka ngosi nke nri. Ha nwere ike ịme salad dị mfe dị ka ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu (anyị enweghịkwa obi abụọ maka nke abụọ ọ ga - abụ).
Akụkụ ọzọ nke ndị France emetụtala ndị Kambodia bụ n'ihi baguette a ma ama. Baguettes bụ obere ogbe achịcha e mere maka nri ụtụtụ ma bụrụ otu n’ime ihe ndị kacha ere ere maka ndị na-ere n'okporo ámá na-ere baguettes na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ ndị na-enweghị oge iri ezigbo nri ụtụtụ n'ụlọ n'ihi enweghị oge ndị na-azụkarị ngwaahịa a n'aka ndị na-ere ahịa n'okporo ámá.
Nri China na emetuta nri ndi Kambodia, enwere ike ihu ya nke oma na nri nke eji noodles na dumplings.
Dị ka iwu zuru okeNdị Kambodia na-erikarị nri na azụ na osikapa. Enwere uzommeputa maka catfish curry, Nke a na-esi mmiri na banana banana, ọ bụ efere ndị njem nleta niile na-atụ aro mgbe ha riri ya na Cambodia maka ụtọ ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye anaghị eri anụ, a ga-enye akwụkwọ nri ọhụrụ na soy bean sauce. Na eji megharịa ọnụ ị nwere ike ịtụ osikapa ma ọ bụ ugu flan. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ụdị nri ndị ọzọ, egbula oge ịga n'ihu na-agụ ihe.
Achịcha nkịtị nke Cambodia
Ọzọ m ga-agwa gị maka ụfọdụ ụdị nri Cambodia, nke mere na mgbe ị nọrọ ụbọchị ole na ole ebe ezumike ma ọ bụ mgbe ị ga-aga ileta ya, ị maara ihe ị ga-enye iwu n'ụlọ nri yana ị makwa nri ọ bụla nwere. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnụ ụtọ menu karịa.
Dishesdị nri kachasị atọ ụtọ dị na Khmer gụnyere Amok, nri ndị ama ama ama nke Cambodia n'etiti ndị njem. Nke a bụ nri eji mmiri ara ehi akị, curry na ngwa nri ole na ole edobere naanị na Thailand. A na-eme Amok site na ọkụkọ, azụ ma ọ bụ skwid, yana tinyere ụfọdụ akwụkwọ nri. Mgbe ụfọdụ, a na-etinye ya na mmiri ara ehi oyibo na osikapa n'akụkụ.
N'aka nke ọzọ anyi nwekwara K'tieu, ofe noodle na-abụkarị maka nri ụtụtụ. Enwere ike ịkwadebe ya na anụ ezi, anụ ma ọ bụ ngwaahịa mmiri. A na-agbakwunye flavoons n’ụdị ihe ọ juiceụ lemonụ lemon, ose na-ekpo ọkụ, shuga, ma ọ bụ ihendori azụ. Somlah Machou Khmae bụ ofe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ nke ejiri painiapị, tomato, na azụ.
Nri ọzọ dị ebe ahụ bụ Bai Saik Ch'rouk, nri ụtụtụ. Ọ bụ ngwakọta osikapa na anụ ezi. N'akụkụ aka nke ọzọ, Saik Ch'rouk Cha Kn'yei bụ ụdị anụ ezi eghere eghe ị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ ebe.
Lok lak bụ anụ chunky anụ ọkara. Nke ikpeazu bụ otu n’ime ihe foduru nke ọchịchị France. A na-eji ya na letus, yabasị na mgbe ụfọdụ, poteto.
Chok Nom Bahn bụ nri Cambodia a hụrụ n'anya nke ukwuu, nke mere na n'asụsụ Bekee a kpọrọ ya naanị "Khmer noodles."
Chok nom Bahn bụ ụdị nri ụtụtụ maka nri ụtụtụ, na efere mejupụtara jiri osikapa na-ata nri nzuzu, tinyekwa ofe Azụ dabeere na green mere si lemongrass, turmeric mgbọrọgwụ na kaffir wayo. Akwụkwọ osisi mint, akwụkwọ ndụ agwa, agwa agwa, ifuru banana, kukumba, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndị ọzọ dị n’elu wee nye ya ekpomeekpo mara mma. Enwekwara ụdị curry na-acha uhie uhie nke a na-edekarị maka ememe agbamakwụkwọ na ememe.
Chaa Kdam: nshịkọ eghe
Nshịkọ eghere eghe bụ ọpụrụiche ọzọ nke obodo obodo Kambodia dị na Kep. Ahịa ahịa ya nke ọma na-eme nke ọma iji mee ya eghe na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ose Kampot, ndị toro eto na mpaghara. A na-esi ísì ụtọ a na-esi ísì ụtọ Kampot n'ụwa niile, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnụ ụtọ peppercorns na Cambodia. Ọtụtụ na-ekwu na ọ bara uru ịga obodo a maka efere a.
Osisi uhie uhie na anụ na basil
Ọbụna ma ọ bụrụ na ejighị ya, enwere eziokwu na ọ bụ na ị nwere ike ịchọta ụdị ahụhụ niile na menu na Cambodia ... a na-etinye tarantulas na nri ndị kachasị mma. Ma nri na-adọrọ adọrọ maka palates ndị ọzọ bụ ndanda na-acha ọbara ọbara nke ji anụ na basil sie.
Ants dị iche icheSomefọdụ ndanda pere mpe nke na anaghị ahụ ha nke ọma ma ndị ọzọ nwere ike ịbụ ọtụtụ sentimita ogologo. A na-eji ha ginger, lemongrass, galik, yabasị na anụ mịrị amị na-amịcha ha.
Achịcha ahụ nwere ike isoro ose chili iji mee ka ọ dị ụtọ ma na-ewepụghị ụtọ ilu nke anụ ndanda. A na-ejikwakarị osikapa ejiri osikapa eme ihe, ma ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ, ha nwere ike soro gị na obere ahịhịa larvae na nnukwu efere.
Desserts na Cambodia
Echekwala na anyị echezọla banyere desser, n'ihi na anyị eburu Pong Aime (ato uto) n'uche. Ndị a dị n'ọtụtụ ebe na enweghị obi abụọ, ụtọ ha na-atọ ụtọ. Nwere ike ịhọrọ n'etiti ụdị anụ ụtọ dị iche iche ejiri osikapa, mmiri ara ehi zoro ezo na mmiri shuga.. Otu ihe ị na - enweghị ike ịkwụsị ịnwale bụ Tuk-a-loc, ihe ọ drinkụ drinkụ sitere na mkpụrụ osisi, akwa a rawụ, nke a withụrụ na mmiri ara ehi kpụrụ akpụ na ice.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Cambodia » Nri nri na Cambodia
5 na-ezube ịnụ ụtọ okpomọkụ na Ista